Diseembar 2019 | RayHaber | raillynews
Bisha: December 2019
Khidmadaha Gaadiidka Dadweynaha ee Bursa! Ardayda ayaa laga saaray sharciga cusub ee sicirka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Bursa 1 Janaayo 2020. Markaa, 4 sano ka hor, 1,5 TL ayaa laga dalbaday guddiga ardayda [More ...]
Gawaarida Magaalada Istaanbuul ee Magaalada Istanbul ayaa gubay ku dhawaad ​​700 Million oo Rakaab ah
Gawaarida Magaalada Istaanbuul ee Magaalada Istanbul ayaa gubay ku dhawaad ​​700 Milyan oo Rakaab ah; Meterooga, oo loo doorbiday gaadiid deg deg ah oo raaxo leh, wuxuu u adeegay dadka deggan Istanbul xawaare buuxa sannadka 2019 sidoo kale. Ku dhawaad ​​700 milyan oo rakaab ah sanadka gudihiisa [More ...]
TÜDEMSAŞ GCC Shirka Held
Shirka guddiga maamulka ee machadka waxaa loo qabtey shaqaalaha rayidka ah ee agaasinka guud ee TÜDEMSA and waana la xaliyay wixii la rabay. Kulankii la qabtay Khamiista, Diseembar 2019, 26, baahiyaha iyo talooyinka shaqaalaha TÜDEMSAŞ, Memur-Sen [More ...]
Farriinta Sanadka Cusub ee Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha
Wuxuu u dabaaldegayaa sannadka cusub ee waddankeenna, ummaddeenna aad loo jecel yahay iyo dhammaan aadamiga. Waxaan rajeynayaa in sanadka 2020 uu noqdo sanad ay dadku ku rajo weynaadeen, nabaddu ay ka taliso adduunka oo dhan, iyo dareenka saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo wadajirka. Sanadka Cusub, [More ...]
Aasaaska laba khad tareen oo kaladuwan ayaa laga dhigi doonaa Kayseri sanadka 2020
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, 2020 wuxuu ka mid noqon doonaa sannadaha lagu xusayo mustaqbalka Kayseri, ayuu yidhi. Madaxweyne Büyükkılıç, Kayseri, ma ahan oo keliya mustaqbalka maanta inuu aad muhiim ugu yahay mashaariicda [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD Yazıcı Fariinta Sanadka Cusub
Annagoo ah Agaasinka Guud ee Gaadiidka TCDD, waxaan ka tagnay sanad kale oo aan ku bixin karno adeeg casri ah oo tayo sare leh muwaadiniinteenna qiimaha badan. Qaybta ugu muhiimsan ee dunida casriga ah gaar ahaan waddooyinka xadiidka oo ka diiwaan gashan guulaha la taaban karo ee Turkey [More ...]
Marmaray wuxuu shaqeyn doonaa ilaa sanadka cusub ee ciida
Si loo daboolo baahida sii kordheysa ee rakaabka sababo la xiriira Sabtida Sannadka Cusub, Tareenka Marmaray wuxuu adeegsan doonaa oo keliya ilaa 02.00 maalinta Sannadka Cusub. Tareenada Marmaray waxaa lagu dhex mari doonaa inta udhaxeysa Zeytinburnu-Söğütlüçeşme saldhigyada 31-ka Diseembar, 15-daqiiqo. [More ...]
Quraac ku yaal Çambaşı Doğa Xarumaha u Diyaar garow Xilliga
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Güler wuxuu maalgashi muhiim ah ku sameeyaa Ordu si uu khibrad dalxiis u helo sanadka oo dhan iyo gaar ahaan soo nooleynta dalxiiska jiilaalka iyada oo halku dhigga Ordu Ordu uusan ahayn 3 bilood laakiin uu yahay 12 bilood Ordu. [More ...]
Ku ballan qaad Farxad ka ah Buuraleyda Ordu
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Güler's Ordu Army ma ahan 3 bilood laakiin 12 bilood ”ujeeddo ayaa la leeyahay. Si aad uhesho jiilaalka Ordu, Dowlada Hoose ee Magaalada, Akkuş [More ...]
ANTRAY iyo Basaska Magaalada waa bilaash ilaa Sannadka Cusub
Gaadiid bilaash ah Sanadka Cusub. Hadiyad sanadka cusub oo ka timid Duqa Antalya Muhittin Böcek oo la siiyay dadka dagan Antalya. Basaska taarikada ee rasmiga ah ee ay leedahay Dawlada Hoose ee Magaalada iyo ANTRAY waxay adeeg bilaash ah siin doontaa muwaadiniinta ilaa sanadka cusub. [More ...]
Safarada Akçaray ayaa socon doona ilaa 02.00 Caawa
Gaadiidka, oo ah shirkad laga leeyahay degmada Kocaeli Magaalo-Weyne, ayaa ku dhawaaqday in Akçaray ay shaqeyn doonto illaa iyo 02.00 maalinta Sannadka Cusub. Akçaray'ın maalinta koowaad ee sanadka Janaayo 1, 2020 saacadu markay tahay 02.00:30 ilaa XNUMX daqiiqo XNUMX daqiiqo kasta [More ...]
Madaxweyne Soyer wuxuu ku dhawaaqay 2019 Gaadiidka Dadweynaha
Duqa magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu bilaabay maalinta ugu dambeysa sanadka gaadiidka dadweynaha. Soyer wuxuu siiyay ubaxa iyo huurada 18-ka rakaab ee rakaabka ah iyo darawalkii 1aad ee XNUMXaad ee adeegsada doonta. Izmir [More ...]
2019 wuxuu ahaa Sannadka Maalgashiga ee İzmir
Dawladda Hoose ee Magaalada İzmir waxay ku maalgelisay 2019 bilyan TL sanadka 3,3. 41 boqolkiiba wadarta kharashka ku baxa maalgashiga qaddarka maalgashiga magaalo weynta ayaa kordhay 16 boqolkiiba marka loo eego sanadkii hore. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, [More ...]